Waa maxay, sidee u dhacdaa iyo saameyn noocee ah ayuu rime leeyahay? Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii waligaa ma maqashay warka ku saabsan riyo. Waa dhacdo saadaasha hawada oo dhacda marka ceeryaantu qabowdo. Si ifafaalahan loo arko waa inay jiraan astaamo iyo arrimo qaar. Caadi ahaan wakhti kuleyl hooseeya iyo ceeryaamo joogto ah ayaa loo baahan yahay. In kasta oo ay xaqiiqda tahay inay tahay dhacdo saadaasha hawada oo meelo badan ka dhacda, haddana dadku si fiican uma yaqaan.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno dhammaan astaamaha rim iyo sababta ay u dhacdo.
1 Muxuu Yahay Rim
3 Muxuu geesku dhacaa
Muxuu Yahay Rim
Pablo VA - Waxaan nahay Palencia
Waa dhacdo saadaasha hawada ah oo dhacda markii ceeryaantu qabowdo. Marka uu jiro qabow iyo ceeryaamo joogto ah oo ay keento qoyaan badan, rime ayaa badanaa dhaca. Sawir qaadayaal badan ayaa ka faa'iideysta ifafaalaha noocan ah si ay u qaadaan sawirro xiiso leh. Badanaa waxay ku dhacdaa meelaha ay jiraan ceeryaamo cufan heerkulkuna hoos uga dhaco 0 darajo. Qiimayaashan heerkulka barta dharabtu waxay ka hooseysaa qabowga.
Waqtigaan la joogo waa marka heerarka biyaha ee hawada sabeynaya ay bilaabaan inay ku qaboobaan dusha aagga. Waxaan xusuusan nahay in biyuhu u baahan yihiin dusha sare inuu barafoobo. Sidaa darteed, walxaha ciidda yar-yar ee cabbirka ayaa loo baahan yahay inay u shaqeeyaan sidii udub-u-qaadista uumiga 'hygroscopic'. Marka dhibcaha biyuhu bilaabaan inay barafoobaan dusha sare waxay samaystaan ​​baalal ama irbado baraf jilicsan. Qaababkani waxay la mid yihiin barafka laakiin isku mid ma aha.
Meel ay guux ka dhacday waxay aad ugu egtahay meel kale oo baraf ka da'ay. Si kastaba ha noqotee, haddii aan u dhowaanno dusha sare ee dhagaxyada, laamaha geedaha, caleemaha, iwm. Waan arki karnaa in cirbaddan yar iyo qaabab baalal u eg oo baraf ah oo ay keeneen ceeryaanta barafoobay. Magaalooyinka iyo magaalooyinka Spain ee leh webi u dhow ayaa ah kuwa ugu badan ee u tartamaya dhacdadan. Waa mid ka mid ah sababaha Rime wuxuu si joogto ah uga dhacayaa xilliga qaboobaha Valladolid ama Burgos.
Waana in wabiyadu ay yihiin ilo qoyaan joogto ah oo deegaanka ka mid ah. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo ay ugu wacan tahay socodka joogtada ah ee biyaha, ubax aad u cufan ayaa soo baxa kaas oo ka caawiya inuu sii hayo huurka deegaanka. Marka ay jiraan waxyaabo is-khilaafsan oo heer kul ah habeen iyo maalinba, noocan oo kale ah cows cufan ayaa badanaa dhaca oo mahadnaq u helidda dhirta ayaa badanaa la hayaa. Haddii heerkulka jawigu ka hooseeyo 0 darajo, rime ayaa u badan inay dhacdo.
Waxaan aragnaa in mar haddii buuqu kaco ay siyaabo qaarkood u dhici karto. Haddii hydrometer-ku ku kaco joog sare oo heer kulka uu hoos ugu dhaco 2 darajo oo ka hooseeya eber iyadoo ay jirto dabeyl, Waxaan aragnaa in amarku adkaado oo kiristaalo baraf ah ay u sameysmayaan qaab ka duwan. Kiristaaladan barafka ahi ma laha hannaan qaabeed oo la mid ah barafka dhaca marka uu baraf jiro, laakiin taa beddelkeeda waxay abuurtaa cirbado isdaba-joog ah oo u kora jihada dabaysha. Waqtiga dheer ee rimuhu sii jiro iyo shuruudaha u roon, baraf badan ayaa awoodi doona inuu uruuro.
Waxyaabaha ay tahay inaan ku jahwareerin rime waa dhaxan. Aad bay u badan tahay in lagu jahwareeriyo xitaa laba dhacdo oo gebi ahaanba kala duwan. Si ay guuxdu u dhacdo, waxaa lagama maarmaan ah in deegaanka ay ka jirto ceeryaamo aad u cufan. Dhaxanku wuxuu dhacaa marka uumiga qoyaanka laftiisu ku dhaca deegaanka. Xaaladdan oo kale, looma baahna inay jirto ceeryaan, in kasta oo ay run tahay in huur badan loo baahan yahay deegaanka.
Rime-ku wuxuu dhacaa marka ay jiraan dusha sare oo ceeryaamo ah oo awood u leh inay ka ilaaliso qoyaanka deegaanka. Sababtaas awgeed, waxay ku badan tahay meelaha ay webiga ku jiraan iyo dhirta la xidhiidha. Xaqiiqdii, haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad aragto qarka, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto oo aad tidhaahdo waxay leedahay muuqaal u eg muuqaallada barafka. Way iska cadahay in markay riwaayaddu muuqato, ay sabab u tahay barafka soo dhacay oo qoto dheer. Ereygan waxaa si weyn looga yaqaanaa gudaha Jasiiradda Iberian Peninsula.
Muxuu geesku dhacaa
Si ay ifafaaladan saadaasha hawadu u dhacdo, cimilo nadiif ah ayaa loo baahan yahay xilliga jiilaalka, heerkulka hooseeya iyo meelaha qaar oo ay ku hayaan huur ku filan. Waa ku soo noqnoqon badan meelaha buuraleyda ah halkaas oo uu ku yaal webi iyo ubaxyo la xidhiidha. Waxaa badanaa loogu yeeraa sida dhigaal baraf ah oo ay sameeyeen qabowga dhibcaha ceeryaanta ama daruuraha hooseeya. Waxaa la dhihi karaa ceeryaantu waa wax aan ka badneyn daruuro hoose oo ku yaal heerka dusha sare.
Dhacdadan si ay u dhacdo heerkul ka hooseeya qabow ayaa loo baahan yahay. Tani waa sida loo soo saaro dawacooyinka subaxdii iyadoo leh soo noqnoqon badan meelaha dooxooyinka, gaar ahaan. Cawaaqibka ugu weyn ee dhacdadan inay dhacdo waa qaboojinta-waqtiga shucaaca. Tan awgeed, waxaa loo baahan yahay faraq weyn oo u dhexeeya maalinta iyo heerkulka habeenkii.
Xaaladaha lagama maarmaanka u ah guuxa inuu dhaco waa cimilo nadiif ah, dabeyl la'aan, farqi weyn oo u dhexeeya heerkulka maalin iyo habeen iyo in heerkulka subaxnimadu ka hooseeyo ama waxyar ka sarreeyo 0 darajo. Haddii dhammaan shuruudaha deegaankan la buuxiyoWaxay u badan tahay inaan leenahay ceeryaamo subaxnimo caadi ah oo rogeyn doonta. Waxay aad ugu badan tahay dhulka dooxada wabiga oo leh qoyaan aad u sarreeya iyo heerkul hooseeya.
Heerkulka habeenkii waa inuu ahaadaa mid aad u hooseeya isla markaana qoyaan u dhigma oo aad u sarreeya. Qoyaanka ka dhasha daruurtu waa inay ku yaalliin heer dhulka, taas oo u sababi doonta inay isu beddesho baraf markii ay xoqdo dusha sare. Hawada qabow waxay u egtahay inay ka soo degto meelaha dhaadheer waxayna ku darsataa qadar badan oo qoyaan ah oo sahlaya sameynta cows. Qoyaankaan aadka u sarreeya ayaa ah waxa ka caawiya sidii loo heli lahaa biyaha lagama maarmaanka u ah sameynta ceeryaanta, oo marka dambe, ku qaboojiso dusha sare.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto rim.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Buuq
Kubadaha Hugo dijo
Intee in le'eg baa qalad ah, oo aan cidina wax ka beddelin waxyaalahan?
Jawaab Hugo Bolas